Butterfly Zvinoreva MuBhaibheriKubva Caterpillar Kusvika Butterfly - Kunamata
sei kuwedzera kupenya pane iphone
chii chiri kutsvaira ipad bhatiri rangu
yangu iphone 6s haina kukunda mhete
sei foni yangu isina kubatana newifi
Butterfly Zvinoreva MuBhaibheri
Butterfly zvinoreva muBhaibheri , Butterfly muBhaibheri inofananidzira rumuko . Iyo metamorphosis kubva kumhashu kusvika butterfly ine inokatyamadza yakafanana kune Kutendeuka kwevaKristu , kumuka, uye kushanduka.
Kubva pamhashu kusvika butterfly
Butterflies chikamu chechisikwa chaMwari chinoshamisa, pakati pemapapiro uye mavara ivo vanoshongedza akanakisa emakwenzi emakwenzi. Ichi chipembenene chakanakisa ndechemhuri yeLepidoptera. Kuti usvike pakuratidzira runako rwayo mukubhururuka kwakanaka, usati wafanirwa kutora maitiro akareba uye akaomarara, anotanga nekuzvarwa kwayo, kudzamara yasvika pakuzara kwayo. Maitiro aya anozivikanwa se: Metamorphosis Izwi rekuti metamorphosis rinobva muchiGiriki (meta, change and morphed, form) uye zvinoreva shanduko. Iyo yakakamurwa muzvikamu zvina zvakakosha:
Pupa kana chrysalis (cocoon)
Imago kana mukuru (Butterfly)
Butterflies uye Shanduko
Kuva shavishavi kungaratidzika kunge kuri nyore kune chero munhu asina kudzidza metamorphosis zvakadzama. Ichi chiitiko chinorwadza, icho chekukura, kutyora chihuku, kukambaira, kubvisa mapapiro zvishoma nezvishoma mukurwira kusingaperi kuti usafe, usingakwanise kubvuma kuti chero munhu anomubatsira, zvese zvinoenderana chete nesimba rake iva nechido chakanaka. , akanaka uye akakwana. Kugona kutambanudza mapapiro uye kubhururuka idambudziko guru. Ndinofunga kuti sevakadzi vechiKristu isu tine zvakawanda zvakafanana nemapururufuru.
Kuti tisvike pakukura kwedu pakunamata tinoda shanduko. Shanduko inofambira mberi kubva pamhashu kusvika butterfly inotitungamira kukutendeuka kwechokwadi, ichititungamira munzira yekukunda uye shanduko yechokwadi: Ini handichisiri kurarama, asi Kristu vanogara mukati mangu . VaGaratiya 2:20.
Caterpillar inorarama nekukambaira pasi. Ndiwo zvakare mararamiro edu patisingazive Ishe, tinozvidhonza nematambudziko ese epanyika; mhuri, zvemari, hutano; Tinonzwa kusachengeteka, kutya, kuvava, kushushikana, kunyunyuta, kushomeka kwekutenda, tinokambaira tisina tariro, nekudaro isu tinongokwanisa kuzvivharira mumukoko wematambudziko nematambudziko. Tatarisana nemamiriro ezvinhu akaoma, tinoramba takabatwa senge ramangwana shavishavi, tichifunga kuti hapana uye hapana anogona kutibatsira. Isu tinoisa miganho pane kufunga kwevanhu kusingatitenderi kuti tifambe munzvimbo inoshamisa uye yemweya yaMwari.
Shoko rinotitaurira muna Muparidzi 3: 1, 3:11:
Chinhu chese chine nguva yacho, uye zvese zvinodiwa pasi pedenga zvine nguva yacho . 3.1
Iye akaita zvese zvakanaka panguva yake; uye akaisa kusaguma mumoyo yavo, pasina munhu anokwanisa kunzwisisa basa rakaitwa naMwari kubva pakutanga kusvika pakupedzisira . 3.11
Uye inguva chaiyoiyo iyo mhashu uye isu tinofanirwa kuve shavishavi. Kubuda mukati mekoko, kuipwanya muhondo kunogara kwakaoma, asi isu tina Mwari uyo, pamwe nemuedzo, anotipa nzira yekubuda. Ishe havatenderi chero chinhu kuti chiuye kwatiri chatisingakwanise kutsungirira, nekuti kuyedzwa kwekutenda kwedu kunounza kutsungirira (Jakobho 1: 3) .
Caterpillar haichadi kukambaira zvekare, yakatora nguva yayo mukati mekoko, ikozvino yagadzirira kuve shavishavi. Ishe vane nguva dzedu mumaoko avo (Mapisarema 31.15) , nguva yekumirira yakapera, apo sezviri pachena isu takatenda kuti hapana chiri kuitika, Mwari aivepo achitipa simba, achivhura maburi kuti isu tivheneke, tichirwa hondo dzedu.
Inguva yatinomira kukambaira, inguva yekumuka nekupenya, asi isu tinogona chete kuzviita kana tikatanga kubuda mukati mekoko, kubuda munzvimbo yemazuva ese yekunyaradza, kukura muhondo. Rutendo rwedu runozadzikiswa muutera.
Kana tangotanga kukura mukutenda, isu tinofanirwa kudzidza kuzvidzora isu sehwaro hwehupenyu hwedu. Ita kudzoreredza kuburikidza nekunzwisisa uye kuverenga Bhaibheri. Pedza nguva wakanyarara uye uri woga pakudzidza kwako. Dzidzira kutsanya (zvishoma kana zvakakwana) uye munamato.
Namatai musingaregi (I VaTesaronika 5:17) , ziva Mwari saIshe wako wega uye Muponesi, kuenderera mberi nekudyidzana naBaba kuchaita kuti tibude mukokonesi tiine chokwadi chekuti zvese zvine nguva yacho, nechivimbo chekuti: Kana uchipinda nemumvura, ndichave newe; uye kana nzizi dzikasakukundisa. Kana uchipinda nomumoto, haungatsvi, nomurazvo haungatsvi mukati mako. Nokuti ndini Jehovha, Mutsvene waIsraeri, Muponesi wako . Isaya 43: 2-3a
Ikozvino masimba awanda uye izvo zvaiita sezvisingagoneki ichokwadi nekuti hauchisiri kungofunga zvakanaka chete, asi unofamba mune zviyero zvekutenda senge Ndinogona kuita zvese muna Kristu vanondisimbisa VaFiripi 4:13 . Nhasi tiri zvisikwa zvitsva, zvinhu zvekare zvapfuura, tarisai, zvese zvaitwa zvitsva. (2 VaKorinde 5:17)
Semabhururu, isu tave kugadzirira kubhururuka uye kusvika pamatanho matsva ayo Ishe avanayo kwatiri. Ngatifungisisei nezvazvo VaRoma 12: 2 Regai kuzvienzanisa nezera rino, asi shandurai shanduko yenyu kuburikidza nekuvandudzwa kwekunzwisisa kwenyu, kuti mugoona chiri chakanaka kuda kwaMwari, kunofadza uye kwakakwana
Ngatirambei tichizvishandura zuva nezuva kuburikidza nekuvandudzwa kwekunzwisisa kwedu kuitira kuti kuda kwaMwari, kunofadza uye kwakakwana, kuonekwe matiri.
Kukurudzira: Dai simba rinoshandura raMwari rasvika kuhupenyu hwedu.
Kuzvimirira Kudzidza, kweMasero uye Mapoka Madiki:
1. Ziva mashandiro emametamorphosis mune shavishavi.
2. Rondedzera maitiro ega ega ekugadzirisa zvinhu nechirevo chemuBhaibheri.
Semuenzaniso: Caterpillar (Mavambo 1:25) Mwari akaita mhuka dzenyika dzine marudzi adzo, nezvipfuwo zvine marudzi azvo, nezvinhu zvose zvinokambaira panyika zvine marudzi azvo. Mwari akaona kuti zvakanaka .
3. Ndeapi eaya maitiro aunonzwa kuzivikanwa nawo? Sei? Tora nguva inodiwa uye nyora pasi zvese zvaunonzwa uye zvaunofunga panguva ino.
4. Pamwe chete nemubvunzo uno tinokupa machira machena maviri uye hamvuropu isina anotumira kana muongorori. Vashandise kuongorora hupenyu hwako hwepamweya parizvino. Nyora sekunge urikutaura naIshe. Kana wapedza, vhara hamvuropu. Isa zita rako uye zuva ranhasi. Pakupera kweKutanga Kwetatu yeKosi muna Zvita uchafunga zvekuita nazvo. Iwe unogona kuzvipa kuna mukadzikadzi hanzvadzi kana kungo chengeta nezvidzidzo zvako.
5. Iwe unofunga kuti iro ramangwana butterfly rinotambura mukati mekoko here? Kana iwe uchinzwa wakaputirwa uye wabatwa mumucheka, Ishe vanokuudza kuti: Chema kwandiri, uye ini ndichakupindura uye ndichakudzidzisa zvinhu zvikuru uye zvakavanzika zvausingazivi . Jeremiya 33.3
Tsanangura zvinoreva vimbiso iyi kwauri.
6. Nguva dzemiedzo nekurwa zvinokuita kuti usimbe mazuva ese. Ndinokukoka iwe kuti unyatsoverenga nyaya dzinotevera dzevakadzi avo, sesu, vakararama munguva dzakaoma.
- Zvirevo 31 Rumbidza mukadzi akanaka. Verenga ichi chikamu cheBhaibheri zvakanyatsonaka. Mukadzi asina zita. Iwe unogona kuzadza uine zita rako Amalia, Luisa, Julia Virtuosa zvinoenderana nekuvandudzwa kwekunzwisisa kwako.
- Débora - Bhuku reVatongi. Mukadzi sesu, ane kuda kwaMwari kwakanaka semutungamiri, achimuita anofadza uye akakwana mumaziso ake.
a) Kudzidzisa kupi uko mazwi maviri ebhaibheri ari kupa kwauri?
b) Uchiri kufambira mberi mukuita kubva kumhashu kusvika butterfly? Uri muchikamu chipi iwe zvino?
7. Pakati pekuchinja kwemweya kwehupenyu hwako. Ndedzipi ndima dzaungashandisa zuva rega rega paunomuka? Vanyora pasi uye wozviisa mumusoro zvinoenderana neReina Valera 1960 Version.
8. Iwe wave kuda kuva shavishavi inoyevedza, mukadzi anemoyo waMwari chaiye. Ishe vane hurongwa hwakakwana kwauri. Ndinokukoka kuti ufungisise nezve Tsamba yaJakobho 1: 2-7. Huchenjeri hunobva kuna Mwari.
Panyaya dzemweya dzakataurwa panguva yechidzidzo, tsanangura kuti wakazviita sei muhupenyu hwako.
9. Zvino zvawave uchiitwa mutsva, wadzoreredzwa, uye kuti wave pekupedzisira shavishavi rakanaka rinotambanudza mapapiro aro kuti ribhururuke. Zvinorevei kwauri: Ini handichisiri kurarama, asi Kristu vanogara mukati mangu (VaGaratiya 2:20)
Lucid Kurota Kudzidza? [Bvisa Zviroto Zvinoreva & Matanho]
Kumuka na2am zvinoreva zvemweya
Zvinorevei kana shavishava ikamhara pauri?
444 ZVINOREVA? - Ngirozi yeMweya Nhamba
Kuridza Munzeve Zvinoreva zveMweya - Nzeve dzinochema…